02/01/2019 - Page 2 sur 3 -
Aretina kitrotro : Misy fepetra tsy maintsy arahina
Raha mihoatra ny isan-taona, dia hita fa niakatra ny tahan’ny trangan’aretina kitrotro tamin’iny taona 2018 iny hatramin’izao fiandohan’ny taona 2019 izao. Tena mbola tsy voafehy mihitsy ny aretina hatramin’ny septambra 2018 mankaty. Vokany, mihamitombo hatrany …Tohiny
Ady mivady tany Mangarano : Novonoiny ny vadiny dia namono tena izy
Nandamoaka ny famonoam-bady. Tranga nahazendana no niseho tany amin’ny fokontany Mangarano Toamasina, ny maraim-ben’ny taona vaovao, tokony ho tamin’ny 6 ora maraina tany ho any. Namoa-doza indray araka izany ny disadisa teo amin’ireto mpivady tamin’ity …Tohiny
HJRA : Olona roa maty, 257 naiditra hopitaly
Tsy nieren-doza velively ny faran’ny taona sy ny taom-baovao 2019 teto an-drenivohitra. Araka ny tatitra voaray tao amin’ny vonjy taitran’ ny hopitaly HJRA, dia olona roa no namoy ny ainy nandritra iny fety iny. Iray …Tohiny
Minisitry ny Atitany : Fototry ny fifanolanana
Tsy vao izao no voatonona ny anaran’ny minisitry ny Atitany, raha fifidianana no resahina. Efa hatrany amin’ ny fifidianana dingana voalohany no efa re, fa isan’ny mitsabaka feno anatin’ny raharaham-pifidianana ny tenany, raha raisina ny …Tohiny
Abdoul Aziz Mansour, Sabera Vasram, Firoze Nourbhay, Pradeep Chandarana, sns. Tsy nisy fitsaharana ny fakana an-keriny teratany karana teto an-drenivohitra ary amina miliara hatrany ny vola voalaza fa notakian’ireo jiolahy… Araka ny efa nambara teto ...Tohiny